The Irrawaddy's Blog: အမှိုက်ပုံကြီးဖြစ်နေသော ရန်ကုန်
ရန်ကုန်မြို့ကြီးဟာ လူနေအိမ်ခြေများစွာနဲ့ တည်ထားတဲ့မြို့ ဖြစ်တဲ့အပြင် နိုင်ငံတကာလေဆိပ်၊ ဆိပ်ကမ်းတွေ ရှိတဲ့ အတွက် အစိုးရရုံးများ အခြေစိုက်ရာ မြို့တစ်မြို့ မဟုတ်ငြားလည်း စည်ကားကြီးကျယ်သော မြို့ကြီးပါ။ လေယာဉ်လမ်းကြောင်းက ၀င်ရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားခရီးသည်တွေ၊ သံတမန်တွေ၊ စီးပွားးရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ အမိမြေနဲ့ ဝေးကွာနေတဲ့ အိမ်သူအိမ်သားတွေ ပြန်လာကြတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အဓိက အချက်အချာကျတဲ့ မြို့ကြီး ဆိုတာ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကို ဖြတ်သန်းပြီးတဲ့နောက် ရန်ကုန်မြို့ကြီးဟာ ဒီဗွီဘီ ရုပ်သံက နေဇော်နိုင် ပြောသလို တကယ့်ကို ဂိုဒေါင်ပျက်ကြီး တစ်လုံးလိုပါပဲ။ နှမြောစရာပေါ့။စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ပိုပိုဖြစ်လာတဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ဆိုတော့ ပျက်စီးနေတဲ့ ဂိုဒေါင်ပျက်ကြီးဟာ သပ်သပ်ယပ်ယပ်လေးများဖြစ်လိုက်ရင် သန့်သန့် ရှင်းရှင်းလေးများဖြစ်လိုက်ရင် ထွက်ပြေးစရာမြေမရှိတဲ့ အတူတူ နေသာထိုင်သာလေးတော့ ရှိဦးမှာပါ။ခုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို၊ ကိုယ့်အိမ်ရှေ့နဲ့ကိုယ့်အိမ်နောက်ဖေးဟာ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို နေနေကြတာဟာ အံ့မခန်းပါပဲ။ နံနက်အိမ်ရှေ့ထွက်တော့ အမှိုက်ပုံ၊ ညနေ အိမ်နောက်ဖေးဘက် လှည့်တော့လည်း တစ်ထပ်တိုက်လောက် မြင့်နေတဲ့ အမှိုက်ပုံ။ ဘယ်လိုများ ဖြေရှင်းရမှာပါလိမ့်။ လူတွေကတော့ စည်ပင်သာယာက အမှိုက်ခွန် မှန်မှန် ကောက်ပြီးတော့ အမှိုက် မသိမ်းဘူးပေါ့၊ ကျွန်မတို့ ရပ်ကွက်မှာတော့ ကျွန်မအိမ်မှာ ရှိတဲ့ရက်များမှာ အမှိုက်ကားက မှန်မှန်လာပါတယ်။ အထပ်မြင့်မှာနေတဲ့လူတွေရယ်၊ အမှိုက် ဆင်းပစ်ရမှာကို ရှက်ကြောက် ပျင်းရိနေတဲ့လူတွေရယ်က ည ည ဆိုရင် အမှိုက် ထုပ်တွေကို အိမ်ပေါ်ကနေ နောက်ဖေးလမ်းကြားထဲကို အဆင်အခြင်မရှိ ပစ်ပစ်ချတာများ အလန့်တကြားရှိလှပါတယ်။တစ်ခါတစ်ရံများ သူတို့ ပစ်ချလိုက်တဲ့ အမှိုက်ထုပ်က အရှိန်နဲ့ကို ကျွန်မတို့ မီးဖိုချောင်ထဲကို ၀င်လာတတ်သလို၊ ကျွန်မ အိပ်ခန်းထဲကိုလည်း အမှိုက်ထုပ်က ပွင့်ပြီး စားကြွင်းစားကျန်တွေရော အခြားအမှိုက်တွေရော ရွံရှာစဖွယ်ကို ၀င်လာပါတယ်။ မြေညီထပ်မှာနေတဲ့ လူတွေခမျာ ဒီလောက်ပူအိုက်လှတဲ့ ရာသီမှာ နောက်ဖေးပြူတင်း တံခါးလေးကို ဖွင့်ပြီး အိပ်ခွင့် မရပါဘူ။ ခြင်၊ ယင်တွေ တလောင်းလောင်းနဲ့၊ ည ည ဆို ပူလွန်းလို့ ခြင်ထောင်ထဲ မ၀င်နိုင်တော့ ခြင်ဒဏ်ကို ခံလိုက်ရတာ မနေ့ညအထိပါပဲ။ ဒီညလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲပေါ့၊ အိမ်နောက်ဖေးက လူတစ်ရပ်မက မြင့်နေတဲ့ အမှိုက်ပုံကြီးက ရှိ ရှိနေသေးရဲ့။ ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းက ဆရာမများပြောတဲ့စကားလေးကို မှတ်မိသေးပါတယ်၊ မျက်နှာမှာတော့ သနပ်ခါးနဲ့ ပေါင်မှာကတော့ သေးစီးကြောင်းနဲ့ တဲ့။ ခုတော့ ကိုယ့်အိမ်နဲ့ ကိုယ့်ဝန်းကျင်က သေးစီးကြောင်းက ချောင်းဖြစ်နေလုပါပြီ။ အိမ်မှာရှိတဲ့ အလုပ် လုပ်နိုင်တဲ့ လူတွေအားလုံး အလုပ်လုပ်မှ စားဝတ်နေရေး ပြေလည်တဲ့ခေတ် ဆိုတော့လည်း လူတွေက ပင်ပန်းကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ တိုင်းသူပြည်သားတွေပဲ ရုန်းကန်နေရတာ မဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာမှာ လူတွေဟာ ကျွန်မတို့တွေထက်ကို စက်ရုပ်တွေလိုပဲ အလုပ်လုပ်ကြတာမှ လင်နဲ့မယား၊ မိဘနဲ့ သားသမီး၊ မောင်နဲ့ နှမ တစ်ပါတ်လုံးနေမှ ညနေခင်းလေး တစ်ခင်းလောက် တွေ့ကြ ဆုံကြအောင် ဖန်တီးချိန်းချက်ယူရတာ အမှန်ပါပဲ။ ဒီလောက် အလုပ်တွေ လုပ်နေတဲ့ သူတို့တွေရဲ့ အိမ်ရှေ့မှာ အမှိုက်ထုပ်တွေ ဖြစ်မနေသလို၊ အိမ်နောက်ဖေးကလည်း အမှိုက်ပုံကြီး ဖြစ်မနေတာ ကျွန်မ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပါ။ခုနေတော့ အိမ်ပြန်လာတဲ့ အိမ်ရှင်မကလည်း ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲမှာ နစ်မျော၊ အိမ်ပြန်လာတဲ့ အိမ်ရှင်ထီးကလည်း ဘောလုံးပွဲကိုစောင့်ရင်း ဂျာနယ်တစ်စောင်နဲ့ အချိန်ကုန်လိုက်တာမှ ကိုယ့် အိမ်ရှေ့က လမ်းကလေး ချိုင့်တွေကနေ ကျင်းကြီးဖြစ်နေတာတောင် မသိလိုက်တာမှ အမှိုက်ထုပ်ဆို ဝေလာဝေးသေးရဲ့။အသင့်အတင့် ပြည့်စုံတဲ့လူတွေကလည်း အိမ်ကို အလုံပိတ်၊ လေအေးစက်ကလေး ဖွင့်ပြီးနေတော့ အမှိုက်ပုံအနံ့က နှာခေါင်းကို မကလိဘူးထင်ပါရဲ့။နွမ်းပါးတဲ့လူကလည်း ပန်ကာလေးတ၀ီဝီနဲ့ ဘောလုံးစာစောင်လေး ဖတ်သူက ဖတ်၊ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲလေးကြည့်သူက ကြည့်နဲ့ ဆိုတော့ အမှိုက်ထုပ်လေးတွေ အိမ်ဘေးပုံပုံလာတာ မသိလိုက်ဘူး ထင်ပါရဲ့။ တိုင်းပြည်သစ်ကို ထူထောင်ချင်လိုက်တာ အသေအလဲ။ဖတ်လိုက်ရတဲ့ ဂျာနယ်တွေ၊ ပြောလိုက်ရတဲ့ နိုင်ငံရေးစကားတွေ၊ကိုယ်လိုလားတဲ့ လမ်းစဉ်တစ်ခုအတွက် ၀င်လိုက်ရတဲ့ တိုက်ပွဲတွေ၊ ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ အသက်တွေ၊အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ ဆင်းရဲခြင်း အတိပြီးတဲ့ အချိန်တွေ၊လူငယ်တွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊လူထုတွေ အဆင်ပြေဖို့အရေး ထောက်ကူပေးကြတဲ့ အသင်းအဖွဲ့အစည်းတွေ ....... များစွာသော ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာ အမှိုက်ပုံကြီးထဲကိုများ နစ်မြုပ်သွားမယ် ဆိုရင် သမိုင်းကြောင်းမှာ တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေဟာ ဘယ်သူတွေများ ဖြစ်လာမှာပါလိမ့်။ှ
Hman Tae. Hote Tae. Pyaw Kya Par . Myar Myar Pyaw Pay. Ta Deet Myar Myar Pay Par .very good . it is true. Dar Myo .. Myar Myar Yay Pay Par. such kind of writing is very helpful. also to attract more readers to read such thing and take on board. Absorb in their brain and follow the advice accordingly. Pyaw Kya Par. yay kya Par. Phat Kya Par. Lite Par Saung Ywet Kya Par .Khin Myar Doth - Ma Lote Yin - Khin Myar Doth Ah Twet Bae. both government and the governed. Ote Chote thu Kaw - Ote Chote Khan Thu Yaw ....both are responsible.
mingalartaung mhar po myar del (118st,119st,)
ဟုတ်ပါတယ်။ကန်ထရိုက်တိုက်တွေကအတော်များလာနေပြီဆိုတော့ တဦးတယောက်ချင်းကိုယ်စီ အသိစိတ်နဲ.အမှိုက်သိမ်းလှည်းမှာပစ်ရင် ကောင်းမှာပါ။ ညဖက်နဲ. လူအိပ်ချိန်ဆို တဖုန်းဖုန်းနဲ. ကိုယ်အိမ်တည်.တည်.မဟုတ်ပဲ လမ်းလွှဲဘေးဘီဝဲယာပစ်တာ အတော်ဆိုးပါတယ်။ အမှိုက်မဟုတ်ပဲ အညစ်အကြေးရေသွန်တာ တောင်ရှိပါသေးတယ်။နောက်ဖေးလမ်းကြားအမှိုက်က စည်ပင်မဆိုင်လို.မသိမ်းဘူးတဲ့။ ရပ်ကွက်နေပြည်သူနဲ. အုပ်ချုပ်ရေးတို.က လုပ်ရမယ်တဲ့။ စည်ပင်က အမှိုက်ခွန်ကောက်တာအခုဆိုရင် မြို.နယ်အတော်များများထိရောက်နေပါပြီ။ ပြီးတော့စီးပွားအမှိုက်ခွန်၊အိမ်သုံးအမှိုက်ခွန်ကောက်ပါတယ်။ မြို.တော်သာယာရေး ဆိုတာ အိမ်ရှေ.အိမ်နောက် အကုန် လုပ်ဆောင်မှသာ လှပမယ်ဖြစ်ပါတယ်။
zaw win htut said... mingalartaung mhar po myar del (118st,119st,) May 17, 2012 10:44 AM,,,,,,,,,MinGaLar Taung Nyunt Par Byar. MinGaLar Taung Nyunt.Ta ARR Neth Ma Lote LIte Par Neth Byar. Ta arrr neth maYay Lite Par Neth ( ' Soe Lwin Lwin ' ) Khin Nyunt yeth previous ' constituency II ' pawt. before '88.
ဒီသတင်းက ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာချီ ဖြစ်ပျက်နေတာကို အခုမှ ဧရာဝတီစာမျက်နှာပေါ်မှာတွေ့ဖတ်လိုက်ရတော့သိပ်တော့ မထူးပါဘူး၊ လူတွေစည်းကမ်းမဲ့တာလဲ ပါတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်နံပတ်တရားခံကတော့ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပါပဲ၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတချိန်က လာဘ်စားလွန်းလို့ ထိထိရောက်ရောက်ကြီးအရေးယူသလိုမျိုးထက် ပြင်းထန်တဲ့ အရေးယူမှုမျိုးနဲ့ကို စည်ပင်သာယာဌာနကို အရေးယူသင့်ပါတယ်၊ မြို့တော်ဝန် ၃ -၄ ဆက်လောက်ကို ပြန်ဖေါ်ထုတ်တရားရုံးတင်သင့်ပါတယ်၊ ကြုံတုန်းကြွားသလိုများဖြစ်နေရင်တော့ မှတ်ချင်သလိုသာမှတ်ပါတော့ ၊ မောင်ကောင်း မြို့လယ်မှာမွေး(ဆေးရုံ)၊ မြို့လယ်မှာကြီးခဲ့သူပါ လွန်ခဲ့သော နှစ် ၃၀ လောက်ကထဲကိုက မြို့လယ်တိုက်ခန်းတွေလမ်းကြားမှာ အမှိုက်ပင်လယ်က ခြေသလုံးမြုတ်ပါတယ်၊ အခု ဒီထက်အဆပေါင်းများစွာဆိုးပါတယ်၊ စည်ပင်ကိစ္စ စည်ပင်တာဝန်ယူမှု နည်းပြီး ကုလားကန်ထရိုက်တွေဆောက်တဲ့ တိုက်အတွက် အာရကေသာမျှော်ကိုးနေသော မြို့တော်ဝန်နဲ့ အပေါင်းအပါတစု ပက်ပက်စက်စက်ကို အရေးယူပေးတော်မူကြပါကုန်သောဝ်။
လိုအပ်ချက်တွေ၊ ချို့ယွင်းချက်တွေကို အသေးစိတ် ပြောရင်တော့ ကုန်နိုင်ဘွယ်မရှိပါ။ ကောင်းစေချင်လို့ပြောနေကြတာတော့ သိသာပါတယ်။ကောင်းဖို့အတွက် ပြောင်းဖို့လိုပါတယ်။အဓိကကတော့ စည်းကမ်းပါ။ ဘယ်သူမှထုတ်ပြန်စရာမလိုတဲ့ လူမှုစည်းကမ်းတွေကို ကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ် လိုက်နာကြရမှာပါ။ဥပမာ .. . . အခုပြောတဲ့ . . အမှိုက် ပေါ့။အမှိုက်ကို အမှိုက်ပုံမှာ ပစ်ရမယ်ဆိုတာ . . စည်းကမ်းထုတ်စရာမလိုပါ။အမှိုက်ပုံမှာ အမှိုက်ပစ်ဖို့က ပြည်သူရဲ့တာဝန်။အမှိုက်ပုံကအမှိုက်ကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းဖို့က အုပ်ချုပ်သူရဲ့တာဝန်။ ကိုယ့်စည်းကမ်းကိုယ်သိ၊ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကျေ . . ဒါဆိုရပြီ။ အမှိုက်တွေ အမှိုက်ပုံကိုရောက်ဖို့က ပြည်သူရဲ့တာဝန်နော်။ ဒါဆို . . . ပြည်သူကို အမှိုက်မကောက်ခိုင်းဘဲ၊ အမှိုက်ပုံကအမှိုက်တွေကို လုံခြုံတဲ့ အမှိုက်ကားတွေနဲ့ ရှင်းလင်းပေးဖို့ကို အုပ်ချုပ်သူက လုံးဝတာဝန်ယူပါ။ ကိုင်း . . . ပြောင်းလိုက်ကြစို့ . . အတူတူ။
ကန်ထရိုက်တိုက်တွေ ဆောက်တာကိုက အသုံးမကျတာ ဒီက တိုက်တွေလို နောက်ဖေးဖက်လှည့်တဲ့အပိုင်းကို ကောင်းကောင်းမဆောက်လို့ပဲ.နောက်ဖေးကိုအိမ်ရှေ့ နဲ့တူအောင်ဆောက်လိုက်ရင် ပီးပီ.
သိပ်မှန်ပါတယ် မြန်မာတွေ မရသေးဘူး